Beesha Caalamka oo war ka soo saartay xaaladda Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay xaaladda Galmudug
Khaasaare xooggan oo naf iyo maal leh, ayuu sababay dagaalka afarta maalin ka holcaya Guriceel, waxaana ku naf-waayay saraakiil muhiim ah oo intooda badan ka soo jeeda degaannada Galmudug.
GURICEEL, Soomaaliya – Beesha Caalamka ayaa war-saxaafadeed Wadajir ah ka soo saartay xaaladda cakiran ee Guriceel, oo afartii maalin ee la soo dhaafay uu ka socday dagaal u dhaxeeya Kooxda hubeysan ee Ahlu-sunna iyo Ciidanka Xoogga Dalka.
Waxa ay sheegeen in marka laga yimaado duruufaha bani’aadannimo ee dagaalku sababay, uu horseedi karo dib u dhaca doorashooyinka iyo ka baaqsiga, baacsiga ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna muujiyeen walwal xooggan oo arrinkaas la xariira.
“Colaaddu ma aha oo kaliya mid sababaysa dhibaato bini’aadanimo oo ku dhacda dadka deegaanka, ee waxay sidoo kale tubta ka leexinaysaa hortabinnada degdegga ah ee dhamaystirka hannaanka doorashada iyo la-dagaallanka al-Shabaab”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay UNSOM.
Waxa ay dhinacyada isku haya magaalada ugu baaqeen in ay joojiyaan dagaalka, miiska wadahadalkana lagu xalliyo khilaafka, isla-makaana ay dhankooda diyaar u yihiin taageeridda dadaallada xalka lagu raadinayo.
“Waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada dirirtu ka dhaxayso inay si dhakhso leh u joojiyaan dagaalka oo ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafkooda. Saaxiibada caalamku waxay diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalladaas haddii ay dhinacyadu codsadaan”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka beesha caalamka.
Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, Famaajo, oo waqtigiisii dhamaday 8 bilood ka hor iyo eedeysane Fahad Yaasiin, ayaa ciidankii ugu xoggaanaa ku daabulay Guriceel, si loo soo af-jaro ASWJ, oo ah koox diimeed muddo dheer ka soo talineysay degaanka.
ASWJ, dhankooda, waxa ay ku soo duuleen degaan nabad ah oo maamul dowlad iyo nadaam la aqoonsan yahay uu ka jiro, waxayna taasi sababtay in ay barakacan in ka badan 100,000 oo qof oo dan-yar u badan, kuwaas oo hadda ku dhibaateysan miyiga magaalada.